Category: လက်မှုပညာ 0
Navigator အဓိကအ Dream ဖက်ရှင် ကျန်းမာရေး Recipes အကြံပြုချက်များ လက္ခဏာများ 12>> Category: လက်မှုပညာ Hannover - အမှုအရာ မ Hannover - ဂျာမနီမှာလူကြိုက်အများဆုံးမြို့တ, မြူးနစ်, ဟမ်းဘတ်နှင့်အခြားသူများနှင့်အတူ။ ဒါဟာအောက်ပိုင်း Saxony ၏ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုချက်သည်နှင့်ကြွယ်ဝသမိုင်းဆိုင်ရာအတိတ်ရှိပါတယ်။ ထို XII ထံမှ XIX ရာစုနှစ်များစွာမှ။ Hanover ၏နိုငျငံတျောတျောမြားမြားရာစုနှစ်ကအင်္ဂလန်နှင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထောင်စုထဲမှာတစ်ချပ်အရာ - မြို့တော်ကိုသီးခြားပြည်နယ်၏မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ​​်ကာလအတွင်း, မြို့ဆိုးရွားစွာထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သည်ကို၎င်း, 50s အတွက်နိူးသည်မိမိ detuning ချီ။ တဘက်ကဲ့သို့ပကတိသာအလှဆုံးအဆောက်အဦးများဖြစ်ကြသည်နှင့်မအမြဲ၎င်းတို့၏မူလတည်နေရာ, ဟောင်းအလယ်ဗဟိုကိုသိသိသာသာအရွယ်အစားလျှော့ချခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ဒီနေ့ရဲ့ Hannover ဆွဲဆောင်မှု, ပြတိုက်, ပြပွဲနှင့်အထိမ်းအမှတစာရေးနှင့်အတူလှပသောနေရာဖြစ်ပါသည်။ တစျခုလုံးကိုမြို့သူမြို့သားများမှတဆင့်မြို့တော်ကို 35 အထင်ကရသောအရပ်တစ်ခု Bole, အချိန်ကြာမြင့်မည်ဟူသောစေ့စေ့စပ်စပ်စစ်ဆေးရေးမှီဝဲသောကြောင့်ခေါ်အနီရောင်အချည်နဲ့ညီမျှတယ်။ အဘယျသို့ပထမဦးဆုံးဌာန၌ Hanover ထဲမှာမြင်ရတဲ့ဖို့?
ညနေပိုင်း toxicosis မ Toxemia - မကြာခဏကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်တွေ့ရှိထားတဲ့မနှစ်မြို့ဖွယ်အခွအေနေ။ ကိုယ်ဝန် Toxemia ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းရှုပ်ထွေးကြောင်းရောဂါများတစ်ခုလုံးအကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကနံနက်အနာရောဂါနံနက်ယံ၌ထင်ရှားတော်မူစဉ်းစားလေ့ရှိပါတယ်။ မကြာခဏအဘယျသို့ဖြစ်ပျက်။ ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကဂလူးကို့စအဆင့်ဆင့်ကိုလျှော့ချနေပါတယ်, ကိုယ်ခန္ဓာကိုအပြည့်အဝစွမ်းရည်မြှင့်မှာ operating နေကြတယ်အားနည်းခြင်းနှင့် toxemia သည်နံနက်ဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရှင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ အချိန်ကိုချိုမြိန်ခြင်းနှင့်အာဟာရစားစရာသို့မဟုတ်သောက်ရန်လိုလျှင်, toxemia ဆုတ်ခွာနေ။ toxemia ညဥ့်အခါဖြစ်နိုင်သလား?
ရင်ဘတ်တင်းကျပ်ရန်ကဘယ်လို ? အမျိုးသမီးရဲ့ရင်သားအစဉ်အမြဲယောက်ျားရဲ့အမြင်များကိုဆွဲဆောင်သံသယရှိစရာမလိုပါဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့အသက်အရွယ်နှင့်အတူသို့မဟုတ်ကလေးမွေးဖွားရင်သားကင်ဆာပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲမှုပြီးနောက်၎င်း, ကံမကောင်းတာမဟုတ်ဘဲပိုကောင်းများအတွက်အသိပေးခြင်းသို့သော်မနှစ်မြို့ဖွယ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အမျိုးသမီးများစွာအလေးအနက်ထားသည်၎င်း၏ဟောင်းအယူခံဝင်ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အရည်အသွေးနည်းလမ်းကိုအဖြစ်, ပလပ်စတစ်ခွဲစိတ်မှုအကြောင်းစဉ်းစားကြသည်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့လျှင်ရန်ပုံငွေများထိုကဲ့သို့သောစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုအဘို့အခှငျ့မပွုပါနှင့်ဘုံသဘောမျိုးအပြင်းအထန်တောင်းဆိုကြောင်းအကူအညီနဲ့ဆရာဝန်တွေ whispers - မဟုတ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း?
ဒုတိယအချက်မှာမေးစေ့ - ဘယ်လောက်ဖယ်ရှားပစ်ရ မေးစေ့အစိတ်အပိုင်းအတွက်အဆီပိုလျှံခြံ - ပြဿနာကမင်းသမီး, ဒါပေမယ့်လည်းလှပသောကိန်းဂဏန်းနှင့်ပုံမှန်အလေးချိန်၏ပိုင်ရှင်များဖြည့်စွက်ရန်သာအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဆမေးစေ့နှင့်မည်သို့အမှန်တကယ်ကဒီချွတ်ယွင်းဖယ်ရှားပစ်ရရှိပါတယ်သည်အဘယ်ကြောင့်ယနေ့ကြှနျုပျတို့ထွက်ရှာပါ။ ကို double မေးစေ့ ဖွဲ့စည်းရေးများအတွက်အကြောင်းရင်းများ
အသှငျအပွငျကိုမေးစေ့ပေါ်အရေးအကြောင်းတွေမကြာခဏမျိုးဗီဇကြောင့်ဖြစ်ရတာဖြစ်ပါတယ်, မျက်စိနှစ်သက်တော်မူသည်မဟုတ်။ ထို့အပြင်ဒုတိယမေးရိုးတစ်အဆက်မပြတ်အဖော်အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆီးချိုရောဂါသည်။ နောက်အကြောင်းရင်း - အသားအရေ elasticity ၏ဆုံးရှုံးမှု, အမေးစေ့အရုပ်ဆိုး sagging အပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်အရာ ။
မကြာခဏဆိုသလိုမုန်း၏တွန့်နေတဲ့ဒုတိယမေးစေ့နှင့်အတူတိုက်ပွဲအလေးချိန်ဆုံးရှုံးသွားအတွက်, ဒါပေမယ့်အထူးလေ့ကျင့်ခန်း, ထောက်ခံသေံလည်ပင်းနှင့်မျက်နှာကြွက်သားတွေအတွက်အဓိကအားဖြင့်မဟုတ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည့်အလေးချိန်ထက်လျော့နည်းသွား, ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ကျွမ်းဘားကို double မေးစေ့၏ မဖြစ်နေ့စဉ်ဖျော်ဖြေဖို့အနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောလေ့ကျင့်ခန်းကိုကူညီမှမေးစေ့၏ကြွက်သားတွေတင်းကျပ်ရန်: ထိုဆူညံသံတွင် N က, ငါသည်မျက်နှာကကြွက်သားတွေကိုအချုပ်ခန်းရုန်းကန်မှုတွေ။ ရှေ့သို့အောက်ပိုင်းမေးရိုး Set နှင့်နှာခေါင်းမှအနိမ့်နှုတ်ခမ်းအဖြစ်ရောက်ရှိနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ထိုင် zaprokinte ဦးခေါင်းနောက်ကျော။ တဆယ်ဖို့ရေတွက်ပိတ်ထားခံတွင်းနှင့်အတူကြိုးစားပါ။ လည်ပင်းကြွက်သားများတစ်ချိန်တည်းမှာတင်းမာနေဖြစ်ကြ၏။ ဒါကြောင့်လဲကျကြောင်းဒါကြောင့်,6မိနစ်, ဖြောင့်နောက်ကျောကိုစောင့်ရှောက် - သင့်ရဲ့ဦးခေါင်းအပေါ်တစ်ဦးမိုးသည်းထန်စွာစာအုပ်သွင်းထားနှင့်3အဖြစ်အခန်းထဲပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်။
ဒုတိယအမေးစေ့ များအတွက် ရိုးရာကုစား
ချင်းပြည်နယ်အတွက်အဆီ ခြံကိုအထူးကုမ္ပဏီများကမျက်နှာဖုံးကိုဖယ်ရှားကူညီ: ကိုအာလူး-ပျားရည်ကို။ ကိုအများအပြားအလတ်စားအာလူး, ဟာအလွန်ထူသောစင်ကြယ်သောရဖို့ potoloch ပြုတ်။ ပျားရည်နဲ့ဆား 1 ဇွန်း Add ပြဿနာကိုဧရိယာမှအပူ၏ form မှာထည့်သွင်းခြင်းနှင့်မေးစေ့ပိတ်ကျဲပတ်တီးကို fix ။ img ။ ရွှံ့ အဆိုပါမျက်နှာဖုံး။ ကိုစည်းကမ်းနှင့်အမျှ, အခြားရန်ပုံငွေများထက် သာ.
အိမ်မှာဆံပင် တခါတရံတွင်သင်သည်ဆံပင်အရောင် freshen သို့မဟုတ်ပါကအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောက hue ပေးစေခြင်းငှါအလိုရှိ၏။ လေးနက်သောပြောင်းလဲမှုမလိုအပ်ရုံ tone လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီဝန်ဆောင်မှု Salon နှင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအတွက်ရရှိနိုင်ပေမယ့်သူ့ရဲ့ရိုးရှင်းအိမ်မှာဆံပင်၏ Tone ခွင့်ပြုထားသည်။ ဆံပင်တင့် များအတွက်အဓိပ္ပာယ်
အထူးကြပ်မတ်ထို့ကြောင့်ခံနိုင်ရည်ပိုမို tone တဲ့အထူးဆံပင်ဆိုးဆေးကိုသုံးပြီးပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအမိုးနီးယား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဆံ့မ, ဤမျှလောက်ပုံမှန်ဆေးသုတ်ကဲ့သို့ဆံပင်ထိခိုက်ပါဘူး။ နူးညံ့သိမ်မွေ့ tone ကွဲပြားခြားနားသော, texture အတွက်ပေါ့ပါးတဲ့နည်းမလြှော့အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု.
ငါး Cosy နေအိမ်များ မူရင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာလွယ်ကူသောတစ်မု Make - ဿုံ doable အလုပ်တခုကို, ကျနော်တို့လုံခြုံစိတ်ချစွာငါးကိုခြင်းတောင်း၏စံနမူနာဆောင်ရွက်ရန်နိုငျကွောငျးသကျသပွေ။ သူတို့ကလျင်မြန်စွာချက်ပြုတ်မဆိုအပိုက​​ုန်ကျစရိတ်များမလိုအပ်ပါဘူး, အဘယ်သူမျှအချက်အပြုတ်အခွက်တဆယ်။ ခလုတ်ကို အပေါ် ကြော် gnezdyshek ငါးကို
မဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်ငါးကိုစာရွက်နှင့်အတူအများဆုံးရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးစျေးနှုန်းသက်သာတဲ့စာရွက်ခြင်းတောင်းအခြေခံအဖြစ်တစ်ချောင်းကိုသုံးပြီးလိမ့်မည်။ ကိုပါဝင်ပစ္စည်းများ: ငါးကိုတန်း (ပုံမှန်အတိုင်း, Pollock, ဆော်လမွန်ငါး) - 600 ဂရမ်;
အပူပိုင်းရေကူးကန် သားသမီးတို့အဘို့ထုတ်ကုန်များ၏ကြီးမားသောအမျိုးမျိုးအနက်အထူးအာရုံစိုက်ခြောက်သွေ့ရေကူးကန်ထိုက်တန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကဘာလဲဘယ်လိုအသုံးဝင်တဲ့နိုင်သနည်း ခြောက်သွေ့တဲ့ရေကူးကန်ပျော့ပျောင်းသောဘောလုံးစာရေးနှင့်ပြည့်စုံကြောင်းကွန်တိန်နာတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်အဖြစ်ဤနေရာသို့သွားရန်အတှကျအသုံးပွုနိုငျသောကလေးငယ်များနှင့်ရိုးရှင်းသောသားသမီးရဲ့ယာယီရေကူးကန်များအတွက်သာမန်နယ်ပယ်တွင်အဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ကနဦးအသွင်သဏ္ဌာန်ကိုယူဖိအားမှာလေကြောင်းရန်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိသောခြောက်သွေ့တဲ့ရေကန်များအတွက် multi-ရောင်စုံဘောလုံးကလေးကိုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအဘို့ဟာလုံလုံခြုံခြုံထောက်ခံမှုသည်။ လေးတွေ များအတွက်ခြောက်သွေ့ရေကူးကန်သုံးပါ
သူငယ်၏ခြုံငုံဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအကျိုးရှိသည်ဟူသောထိုကဲ့သို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုမှအာမင်ရေကန်ကလေးများနေ့အတွက်ကစားခြင်း။ အထူးအပျော့ပျောင်းသောဘောလုံး၏ခြောက်သွေ့တုံအတွက်သင်တန်းတွေစဉ်အတွင်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝြဖစ်ပျက်နှင့်သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး, ကြီးစွာသောနှိပ်နယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုပေးပါ။ ဤသည်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်, အသက်ရှူလမ်းကြောင်း, နှလုံးသွေးကြောများနှင့်ကြွက်သားစနစ်၏တိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ရေကန်၌တက်ကြွစွာပါကစားနေစဉ်အတွင်းအားလုံးကြွက်သားအုပ်စုများကိုခိုင်မာစေခြင်း, မှန်ကန်သောအနေအထားဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဤအတုံ၌သင်တန်းတွေအမျိုးမျိုးသောရောဂါများအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်နှင့် curative အကျိုးသက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံးရှိတယ်ဒါ၏ဟုတ်ပါတယ်, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုတက်ကြွစွာလုပ်ကိုင်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးစေသည်။ ထို့အပြင်ထိုသူငယ်၏စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်အပေါ်သားသမီးရဲ့ယာယီခြောက်သွေ့တဲ့ရေကန်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာပါ။ အမြိုးသားတို့ရေကူးကန်၏ "လှိုင်းတံပိုး" သို့ဇောက်ချပါဝင်လာခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်ဘောလုံးအမျိုးမျိုးအကြားပျော်စရာရှိခြင်းမှာများစွာသောအပျော်အပါးနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်။ အခြားအရာအားလုံးအခါပျော့ပျောင်းသောဘောလုံးကိုမှာ "ရေကူး", သားသမီးအောက်မေ့မူလတန်းအရောင်များကိုအကြားခွဲခြားအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရွယ်အစား၏ပစ္စည်းများကိုဝေမျှဖို့ရန်သင်ယူ, ညှိနှိုင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်, ဒဏ်ငွေမော်တာကျွမ်းကျင်မှုများတိုးတက်စေခဲ့သည်။ ဂိမ်းကလေးများကိုအပေါ်ချိတ်ဆက်စိတ်အေးလက်အေးဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်အစာစားခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်ပိုမိုမြန်ဆန်လဲတစ်ဦးအစာစားချင်စိတ်နဲ့အတူပိုပြီးအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာပြုမူ။ ဒါ့အပြင်ဘောလုံးနှင့်အတူခြောက်သွေ့ရေကူးကန်ထဲမှာပွနျလညျနှင့်ကုထုံးသဘောသဘာဝမတူညီတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်း၏န​​ံပါတ်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ သွေ့ခြောက်သောအင်တုံထဲမှာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့လေ့ကျင့်ခန်း၏ တစ်ဦးကအစုံ ဤအလေ့ကျင့်ခန်းခြုံငုံကျန်းမာရေးကိုခိုင်မာစေရန်ကလေး၏မော်တာကျွမ်းကျင်မှုများဖွံ့ဖြိုးဆဲအဖြစ်ရည်ရွယ်နေကြပါတယ်။ ကို Funnels - အထက်ခြေတွေလက်တွေ၏ညှိနှိုင်းနှင့်အနှိပ်ခန်းဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်လေ့ကျင့်ခန်း။ အမြိုးသားတို့ရေကူးကန်ပြင်ပမှာရပ်တယ်။ ဘယ်ဘက်ရေကူးကန်နှင့်လက်ျာလက်တော်သို့လျှော့ချခြင်းနှင့်မြို့ပတ်ရထားလှုပ်ရှားမှုများကိုလုပ်ကိုဖွင့်ပေးပါ။ ထိုအခါမိမိလက်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ယခုလှည်လှုပ်ရှားမှုများကိုနှစ်ဦးစလုံးစေသည်။ ကိုရေငုပ် - လေ့ကျင့်ခန်းလည်ပင်းကြွက်သားတွေနှိပ်နယ်ထွက်ယူသွားတတ်၏။ အနေအထားစတင်ခြင်း - ချရေကူးကန်မှလက်နက်နှင့်တကွ, ရေကူးကန်၏ဆင်ခြေလျှောထဲမှာရပ်။ ဘက်အခြမ်းကနေဦးခေါင်းလှည့်နေစဉ်ရေကန်ထဲသို့လျှောစောက်ကဆင်း Running ။ ကလေးဘောလုံးအတွက်သူ၏ဦးခေါင်းကိုသင်ျဂွိုဟျဖို့ကြိုးစားပါနှင့်အောက်ဆုံးရောက်ရှိသင့်ပါတယ်။ ကို Rolls - စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကိုစည်၏ကြွက်သားတွေနှိပ်နယ်။ ကလေးသူငယ်အခ ချီသွားကြ၏။ ဒါဟာဆန့်ကျင်ဘက်အနားကွပ်ဖို့ကိုလှိမ့်ရရန်လိုအပ်ပေသည်။ ကိုလက်တို့ကို ကိုစိုစွတ်စေသောမပါဘဲ - ဒီလေ့ကျင့်ခန်း၏ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုမှာ dynamic နှင့် static နဲ့ညှိနှိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ စတင်ခြင်းအနေအထား - ရေကူးကန်အတွက်မပါဘဲခြေထောက်နှင့်အတူရပ်ကြ။ ပထမဦးစွာသင်ကသူ့ဟန်ချက်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားနေလက်ကွဲပြားခြားနားသောရာထူးနှင့်အတူရပ်တည်ရမယ်။ ဟန်ချက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားစဉ်ထို့နောက်ထောက်ခံမှုလက်နက်မပါဘဲရေကန်၏ပတ်လည်အတိုင်းအတာပတ်ပတ်လည်သွားကြဖို့ကြိုးစားပါ။ ကိုစက်ဘီး - ဖျော်ဖြေခြေဘဝါးအနှိပ်ခန်းနှင့်နွားသငယ်ကိုကြွက်သားတွေ။ ဆန့်ခြေထောက်တွေနှင့်အတူအစွန်းပေါ်တွင်ရေကူးကန်၏ဘေးထွက်သူ၏နောက်ကျော, လက်တော်၌ရှိနှင့်တိုက်ရိုက်လက်နှင့်အတူထိုင်။ လက်၌ရှိသကဲ့သို့အများအပြားဘောလုံးလူစုခွဲဖို့ကြိုးစားနေစဉ်တကနှစ်ဦးစလုံးဆိုင်ကယ်ပေါ်, လှုပ်ရှားမှုခြေထောက်ဖျော်ဖြေဖို့လိုအပ်ပေသည်။ Tweet Поделиться